Njengoba igama elisemthethweni lesifo lasungulwa ngemva kokwakhiwa kwezinto zokufundisa, noma nini lapho kukhulunywa nge-nCoV sisuke sibhekisele ku-COVID-19, isifo esithathelanayo esibangelwa i-coronavirus esanda kutholwa.
Sicela uqaphele ukuthi okuqukethwe kwalesi sifundo okwamanje kuyabuyekezwa ukuze kubonise isiqondiso sakamuva. Ungathola ulwazi olubuyekeziwe ngezihloko ezithile ezihlobene ne-COVID-19 ezifundweni ezilandelayo:
Umgomo: isiteshi sokugomela i-COVID-19
Izinyathelo ze-IPC: IPC ye-COVID-19
Ukuhlolwa kokuxilonga okusheshayo kwe-Antigen: 1) SARS-CoV-2 antigen yokuhlola okusheshayo kokuhlolwa kwe-antigen; 2) Ukucatshangelwa okubalulekile kokusetshenziswa kwe-SARS-CoV-2 antigen RDT
English - Français - Español - 中文 - Português - العربية - русский - Türkçe - српски језик - فارسی - हिन्दी, हिंदी - македонски јазик - Tiếng Việt - Indian sign language - magyar - Bahasa Indonesia - বাংলা - اردو - Kiswahili - አማርኛ - ଓଡିଆ - Hausa - Tetun - Deutsch - Yorùbá- ਪੰਜਾਬੀ - Asụsụ Igbo - Soomaaliga - Afraan Oromoo - دری - Kurdî - پښتو - मराठी- Fulfulde- සිංහල - Latviešu valoda - తెలుగు - Esperanto - ภาษาไทย - chiShona - Kreyòl ayisyen -Казақ тілі - தமிழ் - Ελληνικά
Izitifiketi: Isitifiketi Serekhodi Lokufinyelelwe sizotholakala kubabambiqhaza abathola umphumela okungenani ongu-80% wengqikithi yamaphoyinti atholakala kuwo wonke amakhwizi. Abahlanganyeli abathola iRekhodi Lokuphumelela bangaphinde balande i-Open Badge yale nkambo. Chofoza lapha ukuze ufunde ukuthi kanjani.